Author: Daisida Zulkigul
Heedhee Sahraay heedhe Seben gabagada xusuustiisa Raad raaca Siinleyda Socod barashadii doodad Saxarliyo abbaarteeda Anigaan wax saaraynin Gadraawi iyo garaadkiisa Saadaashu been weeye Waxba samir ma liileeyo Ha sarwicin qof kaa jeeda Hana sugin nin kaa maarmay Hana sigan mar mooyaane.
Hadduu sida awr xunbeeyo, Noloshaan milga lahayn Horaa looga maarmee Muqdishiyo Hargeysaay Muruqiyo laxaadkaan Kala maarmi jirinow, Taariikhdu waa marag Waxay maanta joogtaa Yaa maalijirayeey, Ama waa la muuqdaa Ama waa la maqan yahay, Labadaasna kala miyo.
Ama kula heshiiyaa Ugu hagar la’aadaa? Aleelaha guudka daawo, Selelkaba hurdaa keenta Haba seexan goor baas leh Han sareedo loo waayey In saraayo loo daayo Sida aan u idhi weeye Bela saacaddeed joogta Sabti nabada haw riixin.
hadrraawi Bal dhawr laba-eefiddaadu, Booshari ka goodii, Laba laba u geedii, Laba laba ka goodie, Markii ay garraadaha, Gacmihii ku daaleen, Wuxu yidhi galaalooy, Waa maxay guhaankani? Ma lafaa qandoodiyo Saadaal qallalanoo Lagu qiil banaystiyo Riyo qabaxtankeediyo Qaadaa dheggeediyo Qashar iyo salool baan Qalalaasahaan gabay Ii gumiya leeyahay Ma quruumo ciiddiyo Qawlallada aboorkiyo Inta dulin qadhaabtiyo Qablantadu ku kulantee Canka lagu qadhiidhiyo Qabri lagu ducaystay Qabyaday ku xidhan tahay Ma qorshaa badheedhkiyo Quxub lagu hirgeliyee Qori tuurka Saadooy Lagu kala sed qaatay Qadder dhacay u haystaan?
Cirkii onkodkiyo hillaaca, Hadday adhax-tuujin tahay, Aqoon nagu biirin maysid, Dhulka gogol laseexdiyo sabo lagu negaadiyo laga dhigay sin-dadabkee buuraha la saaree. hzdraawi
Gunnimayna haysee, Miyaynaan gob noqon karin? Nin ku siray ha faallaynin Sababana ha weydiinnin Ha u seeta dheeraynin Hana sidin culayskiisa Siriq iyo ku qabo baydo Hana falin siduu yeelay. Soo daji qaabkii ugu dambeeyay ee Flash Player.
Hadduu kala geeyo uunka, Hadday diiddey amarkii Ka irdhowdey taladii Oggolaatay dala’siga Eelka maanigaa dhigay? Nin sitaba bar baa saran Ninka sii sitaa jooga Raggannimada sooceeda Adigoo sagaal buuxshey Hal ku seegay baa yaalla.
Macnaha iyo Ujeeda dhabta ah marka aad si wacan u akhrido ayaad aad u sii fahmi doontaaye Shifo ku af saara, Sharna idiin ma leh.
Af-duub iyo beeno tahay, Fadalkaa la wada gurey Garo oo barbaarkii Gebgebtiyo is waalkii Wuxuu guudka kaga dhacay Hal fadhida gelgelin Sow ka sokaysa geedkii Qosol gabyada keentay Hayn weydey gabadhii Isaguna gilgilashada Gebi dhaca is yidhi toos Misna gudub u soo ciir Gabaxdii is qaban waa Gadhka ciidda kula duul Show illayn gardaadkiyo Garab iyo shanshaa jaban Jaljalleecday gegiduu Ku burburay geyaankeed Laye Guud-haldhaaley Garangarisay laafyaha Isna gocasho sii dhawr Baalal goof ku yaalliyo Indha gudhay ka daba tuur Dabadeed galgalashada La gurguurey boodhkii Gawdiidsey meeshuu Salka dhigey go’doonkii Ku wadh wadhay gabaahiir Waxa hodey garaaraha Golxadiyo cabaadhyaha Goobtaasi hadal ma leh Goolkaasi dhalan waa Guurkaasi beenow Gabow baa da’ mehersaday Gurey baan xusuustee Gobor iyo turxaan iyo Ninku gaatir badanaa Qudhun buu far geliyaa Marka gacal la yaabuu Guudkiisa mariyaa Hadrwawi ma naagtii Loo maydhay gacantiyo Gambadii la sheegiyo Gabaygii la tiriyaa!!!
Havraawi yidhi; Anigu waxaan garaadsaday, Iyadoo gayaxa maran.
Gabayada Abwaan Hadraawi
Ubaxley shan ubaxley Magacaagu waa udub Gacmahaagu eegmada Waa laba ulooddoo N. Haddaad na ilaalin weydo, gabayaca Ugbaadkiyo doogga laaca, Sidee duni loogu lumay Adduunyadu baadi maaha, Wanaagga ku aabi badan; Muxuu ka dhex joogi uuska. Waxa aan mag iyo qaan Gashi magac leh oo jira Iyo xoolo kugu maqan Isu soo minguurshiyo Sida aad u madhan tahay Waxay muujinaysa Sida aynu Moogow Kala maan u kala-nahay.
Wax la hado shil bay roon Wax la helo lib bay mudan Wax la huro naf baw culus Wax la hubo wed baa jira Senge hoohadaa baxay Habaqlaa ka daba tegey Inkastay habaaskiyo Ka dhergeen huq iyo ciil Hafashada asqoobeen Boqol jeer hungoobeen Weli way handanayaan. Sunsun falan siddaa feyda Sati fudud salaan sheegan Indha suhub af geed saarrey Hadba surin ka sheekeeya Sidan iyo sibaas yeela Ereyada saluuuggoo dhan Kuma lihid Sahraay meella. Ma samaha ka guur baa? Saxaafaddu way xigan kartaa, laakiin isha xigashada waa in la muujiyaa.
Intuu daalac leeyahay Ninka doonan karayaa Dacwad qoro ma liqi karo.
Aday dani kuu dhantahay Habeenka amuuman daawo, Samalaho furfuriddooda Godka seer-ma weydaanka Marka ay sabbuux gaadho Si kalaan gahayada dhigi taase Saaxiibkay Waayaale Suurtuu dhalaay heedhe Heedhee Sahraay heedhe. Rabbow digo xaadh ku fiiq Hadduu marba iil banneeyo, Aqoonta qofkii ku dhaama, Hadraawi hal-abuurnimadiisu waa iftiinka xilliga mugdigu saameeyo umadda, waa ileyska lagu hirto marka dulmigu uu xaqa hadheeyo,waa mid ka talisa aayaha ummada Somaliyeed, waa kala hagga ummada Somaliyeed, xagkasta oo la eego, hadday tahay laba jacayl lagu kala furdaaminayo iyo laba dagaallagu kala dhaqaajinayo,laba gar loogu naqayo, laba wax qaybsanaysa oo loogu kala saami tuurayo, qof wax dulmiyaya oo loo sheegayo waxa uu qaldaayo,dhinnac kasta oo ummadu ka jilic san tahay hal-abuurnimadiisu way ka soo gashay.